Tag: kumhanya | Martech Zone
Ipo iwe uchikwanisa kunyoreswa kwedomain kune domain registrar, haisi nguva dzose zano rakanakisa rekubata kupi uye sei domain yako inogadzirisa zvese zvayo zvimwe zvinopinda zveDNS kugadzirisa yako email, subdomains, inomiririra, etc. Domain domain registrars 'bhizimusi rekutanga iri kutengesa madomasi, kwete kuona kuti dura rako rinogona kugadzirisa nekukurumidza, kutarisirwa zvirinyore, uye rine redundancy yakavakirwa-mukati. Chii chinonzi DNS Management? DNS Management mapuratifomu anotonga Domain Name System server
Inotevera Chizvarwa CDN Technology iri Nezve Kupfuura Caching chete
NeChishanu, Nyamavhuvhu 14, 2015 Jason miller
Munyika yanhasi ine hyper-yakabatana, vashandisi havaendi online, ivo vanogara vari online, uye vekushambadza nyanzvi vanoda hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji kuendesa mhando yevatengi ruzivo. Nekuda kweizvi, vazhinji vatove kujairana neyekutanga masevhisi eiyo yemukati kutumira network (CDN), senge caching. Kune avo vasina kujairana nemaCDN, izvi zvinoitwa nekuchengetedza kwenguva pfupi zvitaurwa zvemifananidzo, mifananidzo, odhiyo uye vhidhiyo kumaseva, saka nguva inotevera mushandisi